ACCOUNTANT | MINSON DESIGNER FUTNITURE CO., LTD ﻿
17.8.2019, Full time , Construction / Building
Company: MINSON DESIGNER FUTNITURE CO., LTD
MINSON DESIGNER FUTNITURE CO., LTD
•	လုပ်ငန်းတွင် ဦးဆောင်န်ိုင်ပြီး အရောင်းပိုင်းနားလည်စိတ်ဝင်စားသူဦးစားပေးမည်။
•	Under Pressure အောက်တွင်လုပ်နိုင်သူ။
•	ရုပ်ရည်ပြေပြစ်ပြီး ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ။
•	ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး အဖွဲ့အစည်းနှင့် လုပ်ကိုင်ပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်သူ။
•	စေ့စပ်သေချာပြီး လုပ်ငန်းသဘောစိတ်ပါဝင်စားသူ။
•	သွက်လက်ပြီး ကြိုးစားလိုစိတ်ရှိသူ။
•	အင်္ဂလိပ် (ရေး၊ဖတ်၊ပြော)ကောင်းမွန်သူ။
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်အထက်ရှိပြီး ယခင်အလုပ်များမှ Reference (check) ပေးနိုင်သူ။
•	Computer (Microsoft Office Word Excel, Email, Internet, Online Selling, Order Receiving, Invoicing, Stock, Warehousing, မြန်မာစာစာရိုက် ) အသုံးပြုနိုင်သူ။
•	မိသားစု စိတ်ဓာတ်နှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သူ။
Work location Yangon - Insein Road, Insein Tsp., Yangon.
•	စကားပြော ပြေပြစ်ရမည်။ •	သွက်သွက်လက်လက်ရှိပြီး ကိုယ်စားလိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိရမည်။
•	လုပ်ငန်းတွင် ဦးဆောင်န်ိုင်ပြီး အရောင်းပိုင်းနားလည်စိတ်ဝင်စားသူဦးစားပေးမည်။ •	ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး အဖွဲ့အစည်းနှင့် လုပ်ကိုင်ပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်သူ။ •	စေ့စပ်သေချာပြီး လုပ်ငန်းသဘောစိတ်ပ� ...
•	လုပ်ငန်းတွင် ဦးဆောင်န်ိုင်ပြီး အရောင်းပိုင်းနားလည်စိတ်ဝင်စားသူဦးစားပေးမည်။ •	Under Pressure အောက်တွင်လုပ်နိုင်သူ။ •	ရုပ်ရည်ပြေပြစ်ပြီး ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ။ •	ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး အဖွဲ့အစည်း� ...
ACCOUNTANT Accountancy Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon MINSON DESIGNER FUTNITURE CO., LTD Accountancy Jobs Accountancy Jobs Construction / Building Jobs in Myanmar, jobs in Yangon